Mbido blog Ihe 8 maka ijigide batrị igwe eletrik
Datebọchị ： 2021-07-26 Categories ：blog Nlele ： 1,715
Ọtụtụ mmadụ na-agba ịnyịnya ígwè eletrik, mana ọtụtụ ndị amaghị ka esi echekwa igwe eletrik. Ihe kacha mkpa maka a igwe eletrik is igwe eletrik batrị. Ka anyị gwa gị okwu otu esi echekwa batrị ahụ.
1. A na-ahọrọ batrị batrị nke nwere ụgwọ miri emi na nchapu.
Ha na-eji tọ na-arụ ọrụ njirimara nke batrị na igwe eletriki eletrik bụ nkwụsị nke dị ugbu a dị ntakịrị, oge eji ya dị ogologo, omimi nke nchapu dị omimi, ọ nweghị ike ịgba ụgwọ mgbe ị na-anya ụgbọala. Ogologo oge ịkwọ ụgbọala ahụ, omimi miri emi nke nhapu, dị ka ịkwọ ụgbọala 30-40Km kwa ụbọchị, omimi nke nhapu ga-eru ihe dịka 60% ruo 80%. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa batrị nke igwe eletrik, ị ga-ebu ụzọ họrọ ụdị batrị nwere ụgwọ dị omimi na nhapu.
2. Wụnye batrị ike.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe batrị ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị na arụnyere batrị ahụ na igwe eletrik iji gbochie batrị ahụ imebi site na ịma jijiji mgbe ịnya. Ọ bụrụ na batrị ahụ ezighi ezi ma daa kwa ụbọchị, igwe eletrik ga-agbaji n'oge na-adịghị anya.
(Rịba ama: Onye nchịkọta akụkọ nke "Shozụ ahịa Mfe" na-echetara onye ọ bụla: Ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya igwe eletrik iji bulie ma hapụ ụmụ gị kwa ụbọchị, ị kwesịrị ị paya ntị na nke a. ma ọ bụ gbajie nwa gị.)
3. Wepu ihe ruru unyi na igbe batrị.
Na-ewepụkarị uzuzu na unyi na igbe batrị, ma attentionaa ntị na idebe batrị ahụ ọcha ma dị ọcha iji gbochie batrị n'onwe ya. Nke a nwere ike iyi ihe a na-apụghị ịhụ anya, mana ọ bara ezigbo uru maka ijigide arụmọrụ batrị.
4. Amachibidoro ya ikpughe ìhè anyanwụ.
Debe batrị nke igwe eletrik site na ebe okpomọkụ dị ọkụ. N'oge a na-ekpo ọkụ, a machibidoro ya ikpughe ìhè anyanwụ (ọ ga-akwụrịrịrịrịrị anya anya mgbe ịchekwa igwe eletrik n'oge ọkọchị). Lezienụ anya maka ezigbo ventilashị mgbe ị na-akwụ ụgwọ.
5. Dochie batrị n'oge.
Ọ bụrụ na batrị ahụ gbawara ma ọ bụ na-ekpopu electrolyte, a ga-edochi batrị ahụ iji zere acid acid.
6. Jiri ụkwụ ụkwụ aka mgbe ọ na-amalite
Mgbe igwe eletrik na-amalite, ọ kwesịrị ịmalite site na ụkwụ ụkwụ iji gbochie oke iwepụ ugbu a site na imebi batrị ahụ; mgbe ị na-agba ịnyịnya, attentionaa ntị ka ị ghara ịhafere batrị. Nwepu oke nwere ike ime ka batrị batrị dị njọ, nke ga-ebelata ndụ ọrụ ya nke ukwuu.
7. Ebubula ibu n’ibu.
Ibu oke nke igwe eletrik ga-eduga na mmụba nke moto ahụ, mee ka batrị ahụ ghara ịba ụba, na mmalite batrị ahụ, nke na-emetụta ndụ batrị ahụ. Fọdụ ndị enyi n’achoghị anya na-achụso ikike ibu igwe nke igwe eletriki, ọkachasị mgbe ha na-agba ịnyịnya ígwè iji buo ndị mmadụ, nke na-emebi iwu okporo ụzọ, kamakwa ọ na-emebi ihe ahụ.
mmezi nke igwe eletrik.
8. Batrị ahụ ga-agbanyeghachi ma ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ọnwa 3.
Enwere ike ịgbaji batrị mgbe ejiri ya, ị ga-akwụ ụgwọ ya ka ị na-eji ya iji hụ na ịdị mma nke njem ọzọ. Ikwesiri ichaji ma chekwaa mgbe obula iji gi, gini kari charge fanye ozigbo ma otu ugboro kwa ọnwa atọ iji gbochie mkpuchi batrị batrị a na-agaghị agbanwe agbanwe.
Onye ọ bụla aghaghi iburu nke a n'uche, ọ dị ezigbo mkpa maka mmezi nke batrị igwe eletrik.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwe eletrik eletrik, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị. www.madachị.com.
Tags:igwe eletrik Egwuregwu ígwè eletrik
Mbụ: Ndụmọdụ igwe eletriki igwe (2)
Next: Ụzọ mmezi nke igwe eletriki maka ịnyịnya ígwè
Kedu ihe kpatara m ji achọ igwe eletrik eletrik 1000W
Ọdịda na ndozi nke onye njikwa ebike
Igwe igwe eletriki igwe eletrik eletrik
Mgba ígwè eletriki igwe eletrik ígwè 26
Enwere igwe igwe eletrik maka ire ere ebe a
Kwalite elekere igwe eletriki eletrik na-aga n'ihu n'ihu ìhè
Igwe igwe eletriki igwe eletrik 26-inch nke nwere breeki hydraulic
Egwuregwu eletriki igwe eletrik na 350W n'etiti ụgbọ okporo ígwè